Fandinihana ny Fifanarahana — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nijery ny ankamaroan'ireo fivoriambe ara-politika ireo herinandro roa farany. Ny mpandahateny ao amiko tsy afaka nanampy fa ny-mandinika ny hafatra sy ny oratory fahaiza-manao ny kandidà sy ny mpanohana. Ny olona tsirairay amin'izany sehatra niezaka handresy lahatra anao manokana tantara sy / na ny lehibe fampanantenana.
Miaiky aho, sasany ny faniriany dia tsara, fa ny ankamaroan 'ny kabary nahatsiaro kajy, foana, ary ara-politika fotsiny- ho ahy, fara fahakeliny. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo miteny mahitsy ka diso koa. Fa sehatra miady hevitra dia tsy ny hevitra lahatsoratra ity.
Ny iray amin'ireo zavatra aho dia tonga saina fa raha mbola ny antoko dia miezaka mivarotra anao ny kandidà, izy ireo koa dia miezaka mivarotra anao ny worldviews. Araka ny azy ireo, propserity ara-nofo dia ny tany nampanantenaina, ary ny antoko te ho an'i Mosesy. Ao ny heverina, ny fiainana tsara dia mahazo nanan-karena rehefa miasa mafy, ary ny kandidà dia ny Mpamonjy izay afaka hitondra anareo any.
Ary misy na inona na inona ratsy momba ny harena. Ary rehefa novalian-tsoa ny asa mafy dia zavatra tsara, fa afaka ny tsy ho izay ny fanantenantsika lainga. Ny harena dia tsy tokony ho ny farany tanjona, dia tokony ho fitaovana ho lehibe kokoa farany. Isika koa tsy afaka ny hatoky ny olombelona mba hamonjy ny andro.
Kandidà dia afaka ho mora kokoa ho antsika ny fiainana eto an-tany (raha ny marina ny heviny, rehefa miasa), fa afaka ny tsy ho ny farany fanantenana. Izy ireo tsy afaka hanaisotra ny tontolo rehetra fijaliana, na hitondra fiadanana tanteraka. Ihany i Jesosy dia afaka manao izany. Ary Izy no.
Aza diso fandray ahy. Tsy ho fampaherezana ho anareo ny tsy miraharaha politika. manokana, Mikasa ny vola akaiky tsara ny filoham-pirenena, ary aho hiezaka ny hanao nampahafantatra fanapahan-kevitra mikasika ny hoe iza hifidy ho tamin'ny Novambra. Manentana anareo aho mba hanao toy izany koa. Aho tsy nanao hoe: tsy mifidy, Aho nanao hoe: aza mividy ho any an-lainga.
Ny fiainana tsara dia tsy harena, ary ny ara-politika kandidà tsy miovaova ampy ny hanorina ny fiainanao eo. Ny fiainana tsara velona noho ny finoana ny tsara Andriamanitra sy fananganana ny fiainanao eo Aminy.
Ya'Lisha Wooden • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:12 aho • navalin'i
Eny azoko tanteraka izay lazainao satria fantatro fa ny olona rehetra dia variana amin'ny fijerena ny fivoriambe ary ao an-tsaiko dia toa ny fomba handehan'Andriamanitra hanao ny lalany…Tokony ho azon'ny olona ihany koa fa ny lehilahy iray dia tsy tompon'andraikitra amin'ny governemanta. Raha mandinika ao amin'ny Kongresim-pianarana kilasy isika dia tena mihazakazaka ny governemanta ary mandray fanapahan-kevitra ho an'ny governemanta, toy ny tsy ataonao tsinontsinona ny politika fa mandinika sy fantaro ao am-ponao fa Andriamanitra no mifehy.…. ary manaova fikarohana momba ny tenanao koa momba ireo olana nodinihin'ireto andiany ireto koa satria isika tsy afaka miala amin'izay lazainy sy eritreretiny satria toa tsara izany.…mila manao fikarohana isika…ampianarina isika fa any am-pianarana noho ny antony (mpanabe ho avy hivoaka ahy..Lol)
ChristineRs • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:12 aho • navalin'i
ENY! Ny fahefana dia (na farafaharatsiny, TOKONY) eny an-tanan'ny vahoaka, saingy omentsika ny fahalalahana amin'ny fitondram-panjakana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ho antsika…
Aleoko aleo jerena izay voarakitra an-tsoratra izay mifanohitra amin'ny voalaza. Ny olona dia afaka ary hilaza zavatra hanentana ny fihetseham-po. Fantatrao hoe inona ny atao hoe 'fety iray’ Miorina amin'ny hoe inona ny lampihazo. Mila mitana ny tenin'ireto andrana ireto izy ireo… sahala amin'ny tokony hitantsika amin'ny Baiboly, Constitution, Fanambarana momba ny Fahaleovantena, Volavolan-dalàna momba ny zon'ny olona, sns. Indray mandeha amin'ny taratasy, sarotra kokoa ny mihemotra amin'ny fampanantenana natao nandritra ny fotoam-pifidianana.
Pastorextreme • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:13 aho • navalin'i
Miorina amin'ny lazain'ny Baiboly momba ny firaisan'ny samy lehilahy, Ny fanambadiana sy ny fanalana zaza dia mora!!!
Matthew Hall • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:14 aho • navalin'i
Tsy ekeko fa ny safidy eo amin'ny roa tonta, raha tery ny hifantohantsika, dia mora. Tiako ny hijery izay hitranga raha tsy mijanona milalao ankavanana / ankavia ny kristiana ary hijery izay nolazain'Andriamanitra momba ireo olana mihoatra noho ireo vao miharihary ireo – ny fetran'ny governemanta nomen'Andriamanitra ohatra.
ChristineRs • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:14 aho • navalin'i
Tsy mikasika ankavia sy havanana, raha ny hevitro. Raha tsy milahatra ireo olana lehibe, Mino aho fa ho lasa tsy dia mazava loatra ireo… raha resaka programam-panjakana na governemanta, ny tsapanao ho anjarany?
Ny zavatra voalohany tokony hotsarovana mialoha ny fifanakalozan-dresaka toy izao dia ny mampiavaka ny Fiangonana sy ny Fanjakana. Samy andrimpanjakana voatendrin'Andriamanitra samy manana andraikitra samihafa izy ireo.
Izany lazaina, miteny biblianina, toa ahy ny fandaharana maro izay ampiasain'ny governemanta amin'izao fotoana izao dia tsy latsaka ambanin'ny fanapahana azy ary niniana natao araka izay mety azy. Tsy amin'ny antony manosika antsika fotsiny no ataon'Andriamanitra fa amin'ny ataontsika. Ireto misy ohatra vitsivitsy. fifanampiana, karakara ara-pahasalamana, fiahiana sosialy, Medicare, ary ny zava-drehetra momba ny fikarakarana ny olona dia miankina amin'ny olona tsirairay handray andraikitra ho an'ny tenany, faharoa amin'ny fianakaviana raha tsy afaka manao izany ilay olona, ary fahatelo ny tsy manana ankohonana (mpitondratena sy kamboty) ho an'ny Fiangonana. Mianjera amin'ny fianakaviana ny fanabeazana (Duet 6) ary avy eo amin'ny Fiangonana izay notendren'Andriamanitra mpampianatra sy pasitera (na Levita mankaty OT). Ohatra vitsivitsy fotsiny.
James Stevens • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:15 aho • navalin'i
Ah, ny resaka baolina kitra mahazatra.
Christian • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:15 aho • navalin'i
Saingy tsy nilaza i Jesosy fa hanontany hoe inona ny fomba fijerinao momba ny firaisan'ny samy lehilahy, fanambadiana, na fanalan-jaza rehefa miverina izy. Nilaza anefa izy fa hanontany raha mamahana ny noana ianao, tsy nanan-kitafy, ary mangetaheta. Ka iza no kandidà heverinao fa tena manaraka ny mandatiny…
Rmyers • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:15 aho • navalin'i
Izy dia niresaka mazava momba an'io olana atahoranao io! Tokony hieritreritra toa Azy isika. OE, Izaho sy ianao no tokony hamahana ny noana, lamba ny mitanjaka, ary mikarakara mpitondratena sy kamboty, sns….TSY MISY AZONAO ho an 'ny fianakavian' ny finoana….fa taiza no nasain'i Jesosy hanendry ny fanjakana hanatanteraka izany?? Ny fanalan-jaza dia fiainana sy fahafatesana…toa misy didy momba an'io. Ny fanambadiana dia momba an'i Kristy sy ny fiangonana…raha tokony ataontsika loha laharana ny sehatry ny fifanampiana sy ny mpikomy ara-nofo’ fahalianana manokana noho izany? C'mon Christian, iza no sainao??
ChristineRs • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:15 aho • navalin'i
Manaiky tanteraka… Mampalahelo fa, Reko ny pasitera sasany milaza (amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra) fa ireo olana ireo dia TSY tokony hamaritra hoe iza no hifidiananay… Tsy mampatahotra izany?!
Tjambaya • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:18 aho • navalin'i
Ny fiainana tsara dia misy finoana ny Andriamanitra tsara?Tiako i Trip sy ny fandraisany anjara amin'ny vatana fa raha io no dikan'ny fiainanao tsara mandinika ny herinao tsy maintsy lazaiko fa diso fanantenana aho satria ny fiainana tsara amiko dia ny manana fifandraisana marina amin'Andriamanitra.In tenin'i Jesosy “Tonga Aho hanome azy fiainana sy fiainana be dia be, ary izao no fiainana hahafantarana azy izay naniraka ahy”.Izay nolazain'i Jesosy. Ary i Jesosy dia nanandrana namerina ilay fifandraisana izay nalain'i Adama tao amin'ny zaridainan'ny eden izay nahitana ny fitsidihana goavambe avy amin'ny Andriamanitra tsara. Ny tena fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy ary tsy ny famakiana fotsiny ny teny sy ny fahatakarana ny sitrapony no,Ny fifandraisana aminy amin'Andriamanitra sy ny fandraisana ny tena teny manokana amin'ny fiainanao ary izay azo hamarinina satria izay rehetra maheno avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy hitranga amin'ny tena fiainana.Izy koa dia notsidihan'ANDRIAMANITRA toy ny adam sy David ary ny olona masina rehetra izay nesorina. ao amin'ny Testamenta Vaovao.Izy koa dia miara-mandeha amin'Andriamanitra ary rehefa hitanao ny fomba fiasan'izy ireo eo amin'ny fiainanao amin'ny fiainanao manokana dia manomboka mahatakatra ny maha-izy azy ary azo hamarinina avy amin'ny Soratra Masina koa.Fa ohatra izay mety hanampy anao Andriamanitra amin'ny fandresena ny tsy azo atao toe-javatra ary avy eo mahalala fa Andriamanitra dia mpamonjy ary tsy misy zavatra tsy hain'olombelona atao amin'Andriamanitra,izany no dikan'ny baiboly rehefa milaza fa Andriamanitra dia nanondro an'i Mosesy ny lalany.Tena betsaka kokoa ny milaza momba ny fahalalana an'Andriamanitra ary manana fotoana na habaka hanararaotana izany aho. Fantatro fa hisy ny eritreritry ny sasany fa hisy ny eritreritra sasany hieritreritra fa hisy kristiana charismatic. fa ny teny kosa manamarina ny fomba fijeriko.
Josh • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:19 aho • navalin'i
voalohany, TSY milaza aho fa ny kristiana dia tokony hifidy an'i Romney. (vakio tsara sy averimberina izany fehezanteny izany)
ankehitriny, rehefa avy nilaza izany, ny antony tokana nahalalan'ny kristiana nifidy an'i Obama dia hoe tsy niova hevitra izy sy ilay olona.
moparfan54 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:19 aho • navalin'i
Ny adala ihany no mametraka ny finoany amin'ny olon'izao tontolo izao “afa-tsy” izy ireo amin'ny fahantrana na marary hafa eo amin'ny fiainany, fa ny tsy miraharaha fety iray manala baraka an’Andriamanitra, ary misisika hamono ny tsy manan-tsiny tsy azo hodian-tsy hita. Noho izany dia safidy tokana lojika fotsiny(raha mino ianao) no kandidà repoblikana. Tsy nino ny Repoblikana aho fa mametraka fanantenana sy mivavaka aho mba hanampiany ny Tompo hahita ny lalana tokony harahina.
Veronica • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:19 aho • navalin'i
IZAO hoy aho fa tsy mifidy. Aza mifidy raha tsy misy olona marina sy mihazakazaka araka an'Andriamanitra, satria raha manao an'izay ianao, ianareo dia mividy amin'ny lainga, sa tsy matoky an'Andriamanitra ianao.
Rmyers • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:20 aho • navalin'i
Veronica, ny antoko izay MAHALALA hametraka ny politikany. Ny fihetsikao na ny tsy fihetsehana HANINA amin'ny vokatra. Ny sehatra iray dia mampiroborobo ny fivarotan-tena, ny fahafatesana sy ny trosa izay tokony hananan'ny zanakao-lahy sy ny zanako ho zanany sy hitaiza zanaka. Ny iray hafa dia mikendry ny hisorohana izany sy ny fanimbana entin'izy ireo, ary hitahiry izay nomen'Andriamanitra ny fireneny. Miasa ny finoana – ho soa ho an'ny hafa sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tsy finoana dia manolo-tena ho toy ny fahatsoram-pinoana.
Dr. Nathaniel Wilson, Sr • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:20 aho • navalin'i
Ny fametrahana io fomba fijery io amin'ny fomba fijery ara-Baiboly fotsiny!!! hotahian'andriamanitra anie ianao, ary hitahy ny olona mamaky azy ny lahatsoratrao.
SAINGY • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:20 aho • navalin'i
Raha mifidy araka ny baibolinao, fa tsy misy kandida mahafeno ny fepetra takinao. Eo ankavanana kosa misy olana momba ny rariny marobe (fifindra-monina, mahantra, Zon'ny vehivavy). Eo ankavia kosa misy olana ara-moraly (fanambadiana pelaka, fanalan-jaza, etc.) Vaovao tselatra: ny governemanta dia TSY ny fiangonana. Izany no nandosiran'ireo mpivahiny tany Angletera, ary ny antony mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana dia zavatra tsara (jereo ny tantaran'ny katolika romana). Mila manajanona ny lalàna ara-pitondran-tena isika. Jesosy dia maty tsy noho ny lalàna hanjaka aminay, fa ho an'ny fahalalahana ivavahana Aminy amin'ny Fanahy sy ny fahamarinana. Raha manohitra ny fanambadian'i Gay isika dia tokony hanao izany amin'ny fanomezana ohatra tsara manoloana ny fanambadiana heterosexual, fa tsy ny tahan'ny fisaraham-panambadiana etsy ambony 50 isan-jato. Raha manohitra ny fanalan-jaza dia tokony hanome vola ho an'ny kamboty ary manampy amin'ny programa sosialy izay manampy ny ankizy izahay. Hanova ny fo ny fanamorana ny fanambadian'ny pelaka? No. Hanampy zaza hitaiza zaza ny vehivavy raha manao fanalana zaza? No. Moa ve izy ireo hisoroka na tsia ny ota? No. (Tadidio fa ny fanalan-jaza dia niseho tamin'ny fomba ratsy nialoha ny fahazoan-dàlana). Aoka isika ho tia ny namantsika ary hifidy miaraka amin'ny fahatakarana izay hanaiky lembenana amin'ny fisafidianana olona mety hitranga.
Rmyers • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:21 aho • navalin'i
SAINGY, eritrereto aho eto: tsy afaka manandratra zavatra ve ianao ary manohitra ny mifanohitra aminy koa?? Maninona raha mamorona dilema diso? Raha tsy tokony hikatsaka fanambadiana tsara indrindra araka izay azontsika atao isika, be fitiavana sy manaja ny vadintsika (na mpivady), ary lazao koa fa Andriamanitra dia efa namaritra mazava hoe inona ny fanambadiana – ary io famaritana io dia tsy anisany mifanohitra? Ary ny manome ho an'ny kamboty dia TENY ALOHA ny fampitsaharana ny famonoana zaza tsy manan-tsiny?? (hanohana ny zanakao mpifanila trano aminao hanamarina ny famonoana ny tenanao?)
Ary FOTOTRA tsotra ny lalàna manakana ny fitondran-tena izany – izany no antony ananantsika azy ireo! No,Tsy tonga lafatra izy ireo, fa ny miteny hoe tokony “ajanony ny maha ara-dalàna ny fitsipi-pitondran-tenantsika” malahelo ny zava-misy fa ny lalàna dia ny lalàna mifehy ny fitsipi-pitondran-tena. Moa ve isika tsy hikatsaka fampiharana izay mifanaraka amin'ny lalàn'ny fitondran-tena?
Ny fanambarana izay tena heverina indrindra eto dia tokony ho, “Jesosy dia maty tsy noho ny lalàna hanjaka aminay, fa ho an'ny fahalalahana ivavahana Aminy amin'ny Fanahy sy ny fahamarinana.” MARINA – ny fiankohofantsika – sorona velona ny fiainantsika – tsy maintsy araka ny Fahamarinana izay nambarany. Ahoana ny fomba iainantsika, izay resahintsika, mampirisika, ary manohitra, tsy maintsy atao araka ny FAHAMARINANA daholo (ao anatin'izany ny lalàny ara-pitondrantena) – na TSY Mivavaka Aminy araka ny tokony ho toetrantsika isika, fa ampifanarahina amin 'izao tontolo izao ity tontolo ratsy ity.
FANAHY – ny fiankohofantsika (ny ainay) dia araka ny, ary amin'ny herin'ny, NY FANAHY – ilay FANAHY mitovy nomeny ny mpino amin'ny fahaterahana indray, io Fanahy io ihany no manoratra ny LATRAKO antsika ao am-pontsika rehefa ataony antsika zavaboary vaovao! ENY, Jesosy dia maty noho ny LALANA hifehy ny fontsika – fa tia azy amin'ny fontsika rehetra isika, an-tsaina, fanahy, ary ny tanjaka (ny fandefasana ny Lalàna), ary mampiroborobo ny fahalalana Azy (araka ny FAHAMARINANA) tahaka ny nanambarany ny tenany, sy ny fitiavany (ao anatin'izany ny lalàny).
Maninona isika no tokony tsy miraharaha izay lalàna ampiharina? Nahoana isika no tokony hanao fihetsika toy ny fiainana toy ny fiainana? Tsy araka ny Fanahiny izany – fa ny iray hafa. Tsy araka ny Fahamarinana izany.
Charliemuldrow • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:21 aho • navalin'i
Misaotra noho izany. Mifidy aho araka ny Teny. Tsy mijery ireo kandidà izay jereko mafy eo amin'ny lampihazo aho. Raha ny toerany ny sehatra dia mifanohitra amin'ny Teny, dia tsy mahazo ny vatoko io kandidà io. Tsy hanohana fety iray aho fa ny politikany sy ny fitsipiny dia manohitra mazava an 'Andriamanitra izay tompoiko. Ny fahatokisako dia tsy amin'ny lehilahy na fety politika; ao amin'ny Raiko any an-danitra izay tia ahy. Ny fiainako dia miorina Aminy fotsiny. Finoana aloha RATSY!
Matthew Hall • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:22 aho • navalin'i
Eritreritra lehibe dia fitsangatsanganana. manaiky aho. Tsy afaka mijery filoha isika hamonjy antsika na ny firenentsika. Ny famonjena dia avy amin'ny finoana an'i Kristy, ary ny vokatry ny fankatoavantsika azy dia hiteraka fitomboana izay tadiavintsika amin'izao fotoana izao.
Inona no hevitrao momba ny hevitra hanohanana kandida araka ny tokony ho izy mifanentana amin'ny fandraisana ny Soratra Masina mikasika ny olana toy ny ady fotsiny sy ny fanapahana ny governemanta vs ny an'ny tsirairay, ny fianakaviana, na ny Fiangonana?
ChristineRs • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:23 aho • navalin'i
marina izay nolazainao… raha jerena amin'ireo kandidà’ finoana sy fanohanana amin'ny olana ara-moraly atrehina amin'ity firenena ity, inona no andraikitra heverinao fa milalao amin'ny fisafidianana ny kandidà hofidiany izy ireo?
Emmanuel • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:23 aho • navalin'i
Tsy manantena aho fa hamaly mivantana ny fanontanianao ny Trip, fa afaka mametaka kitapo aho raha mila anao.
Ny fahitako azy, Somary torana aho. Amin'ny maha-Kristianina, Te hifidy ilay naman'ny Fiangonana tsara indrindra aho, Iza no hahita fa natao mba hamporisihana ny fiaraha-monina ary hanome ny fahazavana ho an'ny firenena ny zavatra ilaintsika. Manimba ny firenena ny zavatra toa ny fanalan-jaza, nefa tsy afaka milaza aho fa ny fisian-jaza dia manala ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha fiaraha-monina tonga lafatra tokoa izany manoloana izany, Manantena aho fa hamindra fo amintsika Andriamanitra ary handefa irika handresy lahatra antsika hamoy ity fahotana ity. Nilaza izany, ny fifidianana ny mpanao politika iray ho amin'ny fampiharana ny fanovana no tsy antony tokony hifidianana azy ireo. Matetika aho mahita ny fanalan-jaza sy ny fanambadian'ny pelaka dia ampiasain'ny olona hanery anao hifidy na hanohitra kandidà iray, izay, mahatsiaro anao, mety tsy manana fiantraikany be momba an'io politika io akory (na mety manana zavatra lehibe kokoa eo amin'ny lovany). Tsy te-ho voaheloka ho kristiana fotsiny aho amin'ny fisafidianana kandidà iray amin'ny resaka tokana, ampiasain'Andriamanitra ho toy ny tantanana sasany. Ny tena zava-misy dia tsy fantatsika izay hataon'Andriamanitra amin'ny olona iray na firenena iray vokatry ny fanalan-jaza. Tsy fantatsika fotsiny.
Toy izany koa ny fanambadian'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Manohitra ny firaisan'ny samy lehilahy aho, nefa tsy ny hampiorina azy akory aho no toa fahotana lehibe indrindra eto an-tany. (Ahoana ny momba ny fanitsakitsaham-bady sy ny fijangajangana?? Na fanolanana?) Voninahitra ho an'Andriamanitra ve?? No. Fa inona ny fiantraikany amin'ny hafa ankoatry ny fanamafisana karazana karazana fanovana ny toetra? Moa ve Andriamanitra hifaly tampoka amin'izany?, raha toy ny hoe fiovam-po? No. Amin'ny lafiny iray, izany Amerika, ary samy manana ny safidy izay tiantsika hatao amin'ny fiainantsika avokoa isika rehetra. Raha ny marina, ny etika amerikana antsika dia tokony hoe afaka manao izay tiany ny olona rehetra, raha mbola tsy manakana ny fahalalahan'ny olon-kafa izy ireo. Noho izany dia afaka manao izay tiany ny olona pelaka, raha mbola tsy manakana ahy tsy hiaina ny fiainako izy ireo. Ny olana iray hafa momba ny fifidianana mifototra amin'ny mandatsa-pinoana dia ny fandikana izany: Ahoana raha nisy mpanao politika voafidy niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana hanao lalàna “Soratra Masina” lalàna, ary mampahory azy ireo izy? Efa nosedraina talohan'i Eropa, ary heveriko fa fantatsika rehetra hoe ratsy ny zava-dratsy nitranga. Karazana fampidirana ataon'ny governemanta, na noho ny antony ara-pivavahana na tsy ara-pivavahana, manakana anao tsy hanao izay tadiavinao. Raha manimba olon-kafa ny zavatra tadiavinao, tsy vitanao izany. Fa raha lasa lavitra loatra ny governemanta, mety manakana anao tsy hanao zavatra tadiavinao izany na tokony hataonao amin'ny fieritreretana tsara. Raiso ny fitoriana filazantsara amin'ny Fanjakana Roman. Hatramin'ny niheveran'ny amperora ny tenany ho Tompo sy nitaky ny hivavahana, ny mitory an'i Jesosy dia Tompo no namonoanao. Saingy mila ianao ary mila manao an'izany. Ny tongotra dia eo amin'ny tongotra hafa.
Farany, Ny fahaleovan-tena dia ahafahanao manapa-kevitra ny hanaraka an'Andriamanitra irery. Manokatra ny varavarana mba hiasa malalaka ao am-ponao Andriamanitra, satria ny hetsika ivelany dia tsy takiana aminao. Saingy rehefa takiana ivelany ny fihetsika ivelany, dia ho ataonao mora tokoa ny fanatanterahana ireny fihetsika ireny ho famantarana famantarana fiarovana. Ohatra, maro ao amin'ny fiaraha-moniko no mieritreritra fa ankasitrahan'Andriamanitra izy ireo amin'ny alalan'ny fisehoany am-piangonana, na hoe ny fidirany matetika dia midika hoe mankany an-danitra. Ny fahatsapana fiarovana. Ary ho ahy dia evanjelistra milaza azy ireo fa tsy ao amin'ny fiaran'ny andriamanitra izy ireo miankina amin'ireo antony ireo fotsiny, dia miaro tena izy ireo. Toy ny hoe tsara kokoa noho ny fiangonana izy ireo, tsy mahalala na inona na inona, fa tsy ao anaty fiangonana ary mieritreritra fa fantany ny zava-drehetra.
Izany no ataoko amin'ny fifidianana kristiana amerikana. Mila manome anao fahalalahana aho amin'ny fanapahan-kevitrao manokana (ary raha ilaina, mijaly ho azy ireo), ary miezaha manokana hanolo-tena aminao hampahafantatra anao an'i Kristy, Iza no hanova anao ao anaty?. Fa ny mpanao politika tsy afaka hanao ho an'ny fiaraha-monina izay azontsika atao ho Fiangonana matanjaka. Ka tsy naasa azy ireo ho pasitera sy filohako aho, Mangataka azy ireo fotsiny aho mba ho filoham-pirenena ary tsy handeha amin'ny làlako. (Ary raha misaintsaina an'izany ianao, tsy mila olona araka ny lalanao ianao amin'izay zavatra ataonao amin'ny fiainana, ara-panahy na ara-dalàna.)
theknowledgecorner • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:24 aho • navalin'i
Tsy mikasika ny finoan'ny mpifaninana izany, fa momba ireo olana ao amin'ny lampihazo ireo izay miresaka ny finoantsika ara-pitondrantena amin'ny maha zanak'Andriamanitra. Ity sehatra ity no ho lohamilina mikasika ny lalàna, politika, sns. Ny kandida iray dia afaka manova na manohana ny fepetra iray manokana mba hahazoana vato sy laza; na izany aza tsy mamaritra ny fomba fitantanana ny firenena. Jereo ny fitantanana ankehitriny- niova izy “finoana” fotoana maro no amin'ireto “toa fifanandrifian-javatra” nifanandrify tamin'ny firaisam-bahoaka. Na izany aza, tsy niova ny lampihazo ary efa nifanaraka tamin'ny hevitry ny vahoaka izany. Manohana sehatra liberaly ny Liberaly- na inona na inona finoany. Ny mitovy amin'ireo conservatives. afa-tsy, araka ny efa voalaza, filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena. Ny Kongresy sy ny manankarena no mifehy ny firenena. Mila mivavaka isika ary mitady an'Andriamanitra momba ny lalana alehantsika. Andriamanitra no mivadika ho loha “mpanjaka” amin'ny lalana tiany alehany; na izany aza, mila ataontsika antoka fa tsy mahazaka ireo politika izay mifanohitra amin'ny Teny ny vatantsika. Andriamanitra irery ihany no tsy mety diso.
CherishJesusLuv • Aogositra 20, 2013 amin'ny 6:29 aho • navalin'i
Tsapako fa Andriamanitra no nanoratra ny HIS-TORY….hehe….Ka ny Aline no hanaovany izay nolazainy ao amin'ny soratra masina. Mieritreritra aho ary izao no hevitro fa na dia mifidy ny mpilatsaka ho tsaratsara kokoa aza isika dia hijanona ho fahamarinana ny tenin'Atra ary ho tonga ny Farany sahala amin'izay nolazainy fa.
Mahatezitra ahy foana ireo mpitory fahombiazana noho ny ratsy naterany “vola misy.”….miteny aho, “Vola nomen'Andriamanitra.”
INDRINDRA INDRINDRA IZAO ARY rehefa mahita mpitondratena maty aho, zaza mahantra noana, ary misy olona sembana any……Tsy hafatra ho azy ireo ity hafatra ity? Na izany aza, dia ireo izay manohitra an'Andriamanitra ary maniry ny sofiny ho madiodio, mba afaka hireharehany “ny” harena. Nanontany an'Andriamanitra momba ny mpitory toy izany aho. Dia namaly ahy Andriamanitra ka nanao, “Ankafizo izany ny fitahiana rehetra ho azon'izy ireo, Avelao izy ireo hirehareha amin'ny BMW amin'ny maro amin'ireo zanako noana, Tsy hiaina miaraka amiko mandrakizay izy ireo ary izany dia ho tratran'izy rehetra ireo.” Ka rehefa avy nilaza tamiko izy fa malahelo an'io mpitory fahombiazana io aho…..Satria I BMW na Bentley dia IZANY hoy izy ireo fa mahazo…..
Amin'ny lafiny iray, tiako ny GOSPEL ary fantatro fa malemy izany, maty sy mahantra ary TSY MISY AZON'Atra tsy manam-bola. Departemanta io. Nilaza izy fa hanampy ny zavatra izay ananantsika Izy “mila fanampiana.”
Noana aho ary nijoro teo am-pisakafoana niandry sakafo, ary nahare lehilahy niteny taminay, “Raha mino an'i Jesosy ianao amin'ny voan-tsinapy iray amin'ny telefaonina dia mitondra fiara any Bentley daholo ianareo.” izay nitodika ny vavoniko…
Tamin'izany no nanontaniako an'Andriamanitra momba ny olona toa an'io lehilahy io sy mpitory ny fahombiazana hafa. AOKA IZAO HITADY NY tenin'i JESOSY momba ny zavatra…
Mat 25:40	“Dia hamaly ny Mpanjaka ary hilaza aminy, 'tokoa, Hoy aho aminao, tahaka ny nataonao [izany] amin'ny iray amin'ireo rahalahiko kely indrindra amin'ireto, nataonao [izany] amiko.’
CherishJesusLuv • Aogositra 20, 2013 amin'ny 7:00 aho • navalin'i
Mat 6:19-21	“Aza mihary harena ho anao eto ambonin'ny tany, izay simban'ny kalalao sy harafesina ary aiza no vaky ny mpangalatra sy mangalatra;”fa mihary harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba ary tsy misy mpangalatra sy tsy mangalatra. “Fa aiza ny harenanao, any no ho ao koa ny fonao.